Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Kurume 24, 2021
Mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa voparura chikamu chechipiri chekuti vanhu vabayiwe nhomba yeCovid-19 kuVictoria Falls.
Dare remakurukota rakazivisa nezuro kuti kutanga kwechirongwa chechipiri chekubaya nhomba kuchaona vafundisi, varairidzi, vatongi, vanoona nezvekudzivirirwa kwenyika uye vari kurwara nevane makore makumi matanhatu zvichikwira vachitanga kubayiwa.
Vakapihwa chiremerera chekumirira Zimbabwe kana kuti Honarary Ambassador kuBelarus vachitengesawo zvombo zvehondo VaAlyaksandr (Alexander) Zingman vakasungwa kuDRC mushure mekuita musangano nevaive mutungamiri wenyika iyi VaJoseph Kabila.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvakadzorwa kubva muhupoteri kubva kuDukwi Camp, kuBotswana zvinoti zvichadzokera muhupoteri nekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika.
Sangano rinomiririra zvizvarwa zveSADC zvinogara muAmerica reSouthern African community USA, nemusi weSvondo rakakokera hurukuro padandemutande pamusoro pedenda recovid-19 senzira yekuti veruzhinji vanzwisise pamusoro pedenda iri uye kuti ringabatwa sei.
Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe Warriors chosimuka kuenda kuBotswana kumutambo wakakosha weAFCON
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa nezvekuparurwa kwechirongwa chechipiri chekubayiwa nhomba yeCovid-19 nemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa uye mashoko eAmerica ekuti hurumende yeZimbabwe iri kumbunyikidza vanopikisa.